Umbala wolwandle: kuyini futhi kungani lushintsha | I-Network Meteorology
IsiJalimane Portillo | 07/04/2022 10:00 | Ciencia
Okuhlangenwe nakho kwethu kusitshela ukuthi umbala wolwandle ingashintsha kakhulu ngokuhamba kwesikhathi nendawo: ukusuka kokuluhlaza okotshani ukuya kokuluhlaza okhanyayo kuya kokuluhlaza okwesibhakabhaka okumnyama, okumpunga, nokunsundu. Kuvela ukuthi izinguquko embala wolwandle ziwumphumela wenhlanganisela yezinto ezibonakalayo kanye nemvelo.
Kulesi sihloko sichaza ngokuningiliziwe ukuthi umbala wolwandle uyini, uncike ekutheni kungani siwubona ngendlela eyodwa noma enye.
1 umbala wolwandle
2 Izinqubo zezinto eziphilayo ezithinta umbala wolwandle
3 Izifundo zesayensi
4 Ulwandle luzoba nombala onjani ngonyaka ka-2100?
Amanzi ahlanzekile, yiqiniso, awanambala. Kodwa noma kunjalo, uma sibheka ekujuleni ukukhanya okungafinyeleli kalula, kubonakala kuluhlaza okwesibhakabhaka okumnyama. Iso lomuntu liqukethe amangqamuzana lawo ikwazi ukubona imisebe ye-electromagnetic enobude obuphakathi kwama-nanometers angu-380 no-700. Ngaphakathi kwalolu hlu, amaza ahlukene ahambisana nemibala ehlukene esiyibona othini lwenkosazana.
Amangqamuzana amanzi akubamba kangcono ukukhanya okufinyelela ubude bamaza amade, okubomvu, okuwolintshi, okuphuzi, nokuluhlaza. Bese, kusele okuluhlaza okwesibhakabhaka kuphela nobude bufushane. Njengoba ukukhanya okwesibhakabhaka kungavamile ukumuncwa, kufinyelela ekujuleni, okwenza amanzi abonakale eluhlaza okwesibhakabhaka. Imayelana ne-physics. Kodwa isayensi yezinto eziphilayo nayo ibalulekile, ngoba angamagciwane amancane okuthiwa i-phytoplankton anomthelela omkhulu embala wolwandle.
Izinqubo zezinto eziphilayo ezithinta umbala wolwandle
Ngokuvamile ezincane kunenaliti, lezi algae ezineseli elilodwa zisebenzisa umbala oluhlaza ukuthwebula amandla elanga, ukuguqula amanzi nesikhutha kube izakhi eziphilayo ezakha imizimba yabo. Ngale photosynthesis, banesibopho sokukhiqiza cishe ingxenye yomoya-mpilo esiwudlayo thina bantu.
Ngokuyisisekelo, i-phytoplankton imunca imisebe kagesi ebomvu neluhlaza okwesibhakabhaka ku-spectrum ebonakalayo, kodwa ibonakalisa eluhlaza, okuchaza ukuthi kungani amanzi ehlala kuwo ebonakala eluhlaza. Ukunquma umbala wolwandle akuyona nje umsebenzi wobuhle.
Ososayensi bebelokhu beqapha ulwandle ngosizo lwamasathelayithi kusukela ngo-1978, futhi nakuba izithombe zinenani lobuhle, zifeza enye injongo: ingasetshenziswa ukutadisha ukungcola kanye ne-phytoplankton. Izinguquko kumanani alezi zakhi ezimbili, nokuthi zikhula noma zehla kangakanani, zinganikeza nezimpawu zokufudumala kwembulunga yonke. Uma i-phytoplankton iba ngaphezulu phezu kolwandle, yilapho i-carbon dioxide ikhishwa emkhathini. Kodwa ososayensi bawubona kanjani umbala wolwandle nolwandle?
Indlela esetshenziswa kakhulu ihlanganisa ukusetshenziswa kwamasathelayithi anezinsimbi zokukala ukushuba kokukhanya okubonakalayo okuvela emanzini. Iningi lokukhanya kwelanga eduze nolwandle lithathwa yizinhlayiya ezihamba emoyeni. Okunye kumuncwa kahle noma kuhlakazwe emanzini. Kodwa cishe amaphesenti ayishumi okukhanya aphindela emkhathini futhi ngokunokwenzeka abuyele kusathelayithi, ekala ukuthi kungakanani kwalokhu kukhanya. itholakala ohlaza noma oluhlaza okwesibhakabhaka ku-spectrum. Amakhompyutha asebenzisa le datha ukuze alinganisele inani le-chlorophyll emanzini. Ukuhlolwa kombala wolwandle nakho kwanikeza imiphumela ebaluleke kakhulu.
Ngonyaka odlule, abacwaningi baseMelika bashicilele ucwaningo olubonisa lokho Amazinga e-chlorophyll ezilwandle zomhlaba ashintshile phakathi kuka-1998 no-2012. Awekho amathrendi abonwe ocwaningweni, kodwa izinguquko zemibala eziqoshwe amasathelayithi zibonise ukuthi amazinga e-chlorophyll ehle ezingxenyeni ze-northern hemisphere futhi anda ezingxenyeni eziseningizimu.
Lokhu kwenze abanye bakholelwa ukuthi izindawo ezine-chlorophyll ephansi olwandle ezaziwa ngokuthi “izingwadule zasolwandle” ziyakhula ngenxa yokukhuphuka kwamazinga okushisa olwandle. Kodwa abanye bathi akukabikho idatha eyanele yokukhombisa ukuthi ukufudumala kwembulunga yonke kuwathinta kanjani amazinga e-phytoplankton olwandle, okungase kuguquke ngokwemvelo emijikelezweni yeminyaka eyi-15 noma ngaphezulu.
Olunye ucwaningo lubonisa ukuthi ososayensi bazodinga ukuqapha umbala wolwandle iminyaka engaphezu kwengu-40 ukuze bafinyelele iziphetho. Kulapho kuphela lapho sizokwazi khona ukunquma ukuthi umbala wolwandle usushintshile futhi ngezinga elingakanani. Ngakho-ke ukwazi ukuthi abantu banalo yini ithonya emazingeni e-plankton ekhona, futhi ngenxa yalokho kumjikelezo wekhabhoni.
Ulwandle luzoba nombala onjani ngonyaka ka-2100?
Ukufudumala kolwandle kushintsha ukuhamba kolwandle kanye nengxenye yamanzi ajulile akhuphukela phezulu. I-Phytoplankton idinga ukukhanya (amandla ayo) kanye nezakhamzimba. Iningi lalezi zakhi zomsoco zivela ekujuleni. Izinguquko ezibangelwa ukufudumala ziholele ekutheni imisoco embalwa ifinyelele phezulu, ngakho-ke i-phytoplankton ingase yehle ezingxenyeni eziningi zolwandle.
Umbala wolwandle uncike endleleni imisebe yelanga ehlangana ngayo nokwakheka kwamanzi. Futhi, ama-molecule amanzi amunca cishe konke ukukhanya kwelanga ngaphandle kohlaza okwesibhakabhaka, ngakho okuluhlaza okwesibhakabhaka kuyabonakala.
Ngakolunye uhlangothi, akukhona kuphela amanzi olwandle, kodwa nezitshalo, ama-microorganisms nezinye izinto eziphilayo. Esinye isibonelo i-phytoplankton, equkethe i-chlorophyll, umbala oluhlaza, omunca ukukhanya kwelanga okudingwa izitshalo ukuze zenze ukudla. Futhi, ukukhanya okuningi okuboniswa yi-phytoplankton kuluhlaza. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi izingxenye eziningi zolwandle zine-hue eluhlaza.
Nokho, njengoba ulwandle lufudumala, amanye ama-phytoplankton angase ashabalale, amanye achume, kanti amanye angase athuthele ezindaweni ezihlukahlukene. Izinga lokushisa liphinde lithinte izinga lokukhula kwe-phytoplankton. Ezinye izinhlobo ezijwayele amanzi afudumele ziyashesha kunezinye ezijwayela amanzi abandayo. Ngakho-ke, ezindaweni ezinamanzi afudumele, kungase kube nemisoco eyengeziwe, ngakho-ke kuyoba nokuhlukahluka kwesifunda ekubunjweni, inombolo, nokusatshalaliswa kwemiphakathi ye-microbial yasolwandle enemibala emanzini.
Imibala yemodeli abayisebenzisela ukutadisha ukuziphendukela kwemvelo zisetshenziselwe ukubikezela izinguquko ku-phytoplankton, njengokuqhakaza kwe-algae yendawo noma i-acidification yolwandle.
Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi umbala wolwandle uyini nokuthi yiziphi izici ezincike kuzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » umbala wolwandle
Isimo sezulu esiphezulu saseRoma